प्रधानमन्त्री ओली गफमै सिमित हुन्छन् कि काम पनि गर्छन् ? : RajdhaniDaily.com
Home Editor-Picks प्रधानमन्त्री ओली गफमै सिमित हुन्छन् कि काम पनि गर्छन् ?
काठमाडौं । मुलुकको ४२औं प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीसामु राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिकदेखि कोरोना महामारी चुनौतीका रूपमा चाङ लागेका छन् ।
गत २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त उनी बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सर्वत्र चासो बढेको छ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले पद तथा गोपनीयता शपथका बेला व्यक्त गरेको ‘त्यो पर्दैन’ वाक्यमाथि सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी टिप्पणी जारी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा शपथमा व्यक्त शब्दले ‘राष्ट्रिय गानजस्तै राष्ट्रको सिद्धान्त बोकेको हुने र त्यसलाई हेरफेर गर्न नमिल्ने’ र प्रधानमन्त्रीले ‘फेरि शपथ लिनुपर्ने’मा जोड दिन्छन् ।
सरकारको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले महामारीविरुद्ध ‘कस्तो कदम चाल्छन् ?’ भन्नेमा जनताको चासो बढेको छ ।
‘शपथमा अर्को शब्द प्रयोग नै गर्न पाइँदैन, यसबारे पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि अदालतले आदेश दिइसकेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मैले जे बोले, त्यही संविधान हो । त्यही नेपाल हो भन्ने छ । त्यही कुरा यहाँ झल्किएको हो ।’
ओली संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । धारा ७६ को उपधारा ३ बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहसँगको विवाद अन्त्य गरी साथमा लिएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ । अहिले एमाले एक हुँदा १ सय २१ सदस्य छन् । बहुमतका निम्ति थप १५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
एक महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् र विपक्षी दलले पनि बहुमत पु¥याउन सकेनन् भने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप संसद् विघटन भएर निर्वाचनमा जाने सम्भावना प्रबल छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा कोरोना संक्रमणबाट दैनिक २ सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता महामारीविरुद्धको लडाइँ हो ।
सरकार प्रमुखको हैसियतमा उनले महामारीविरुद्ध लड्न ‘कस्तो कदम चाल्छन् ?’ त्यसैमा धेरै सर्वसाधरणको जीवन गुम्ने वा रक्षा हुने निर्भर रहन्छ । सबैसँग हातेमालो गर्दै सही कदम चालेर नागरिक सुरक्षामा लाग्नु उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
कोरोना महामारीविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न नसके अब हुने आमनिर्वाचनमा त्यसको सोझो असर पार्ने राजनीतिक विज्ञ औंल्याउँछन् ।
भर्खरै टेनिस रोका - July 8, 2020 0
Breaking News टेनिस रोका - November 2, 2020 0
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । अस्पतालले धमाधम धरौटी रकम लिन थालेपछि...
प्रमुख टेनिस रोका - December 25, 2020 0
Breaking News टेनिस रोका - May 2, 2020 0
बैतडी । भारतीय सीमा नाका झुलाघाटबाट उद्धार गरेर ल्याइएका एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका ६ मनकाली बस्ने ६७ बर्षीय जुने...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १४औं वार्षिक साधारण सभा
अर्थ टेनिस रोका - February 8, 2020 0
काठमाडौं। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको १४औं वार्षिक साधारण सभाले १२ प्रतिशत नगद लाभांशसहितको आव २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीको सभामा विगतदेखि नै सरकारी नीति...
प्रदेश टेनिस रोका - October 2, 2020 0
गुल्मी । गुल्मीमा पाँच दिनदेखि हराइरहेका एक व्यक्ति मृत फेला परेका छन् । जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ दर्लामचौर निवासी ४९ बर्षिय बिरबहादुर...
प्रमुख टेनिस रोका - January 12, 2021 0
लक डाउनले नेपाली फिल्मका दर्शक बढे युट्युबमा
Not-to-be-missed टेनिस रोका - April 23, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढेपछि मुलुक एक महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । यो बेला नेपाली घर भित्रै छन् । उनीहरूका लागि दिन...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 4, 2021 0
खेल टेनिस रोका - April 1, 2020 0
लन्डन । युरोपियन फुटबलको सर्वाेच्च निकाय –यूईएफए)ले यो सिजनको इंग्लिस प्रिमियर लिग मे महिनामा सुरु गरेर जुलाईमा सक्ने योजना अघि सारेको छ । बेलायती...